English – မြန်မာ | Danya Wadi
»English – မြန်မာ
By danyawadi November 10, 2019 Leaveacomment
English မြန်မာ Dictionary (Unicode)
By danyawadi November 2, 2019 Leaveacomment
English Myanmar Dictionary English Type/Myanmar _natured (forming compound adjs) adj စိတျ သဘောထားရှိသော။ good -natuerd. _nosed (forming c ..သော နှာခေါငျး ။ -‘s suff ကပိုငျဆိုငျသူဧကဝုဈဖွဈကွောငျးပွနောကျဆကျ။ ခတဈစုံတဈခုသောအိမျ၊ဆိုငျစသညျသကျဆိုငျမှုပွနောကျဆကျ။ နှငျ့အဆုံးမသတျသောဗဟုဝုဈနာမျမြားတှငျပိုငျဆိုငျမှု၊သကျဆိုငျမှုကိုပွနောကျဆကျ။ ရံဖနျရံခါတှငျဗဟုဝုဈကိနျးသို့နာမျဖနျတီးရနျထညျ့သညျ့နောကျဆကျ။ အစားအတိုကောကျ။ နှငျ့ကိုကိုယျစားပွုသညျ့နောကျဆကျ။ -ana suff (ရှဖေ့ျောပွပါ ပုဂ်ဂိုလျ၊ ဒသေ စသညျတို့နှငျ့ တစု တပေါငျးတညျး ဖွဈသော အရာဝတ်ထု၊ ပစ်စညျးကို ပွသော နောကျဆကျစကား)။ -ance suff (ကွိယာကို နာမျပုဒျပွောငျးပေးသော နောကျဆကျ)။ … ခွငျး၊ … မှု စသညျ။ -cidal coidmb သတျမှုနှငျ့ ဆိုငျသော။ […]
အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ (Ornagai), မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် (စိုင်း မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်),
By danyawadi July 4, 2012 Leaveacomment
wxPyDict Dictionary Lookup Program, based on wxWidgets, wxPython, Python, sqlite3, cburglish, and Myanmar Text Tools from Burglish Systems, currently mainly support for Myanmar Language based on Zawgyi Encoding. Download All-in-One Installer Download wxPyDict All-in-One Installer with English->Myanmar(ornagai), Myanmar->English(saing dictionary), and Myanmar Villages Directory(from Ko Nyi Lynn Seck) included Features (Quick) + မြန်မာလိုရော၊ အင်္ဂလိပ်လိုရော အသုံးပြုပြီး ရှာဖွေနိုင်သည်။ […]
By danyawadi May 30, 2012 Leaveacomment
အားလုံးဘဲ မင်ျဂလာပါ။ ကြှနျတျောလညျးအလုပျရှုပျနလေို့စာမရေးတာ တျောတျော တောငျကွာသှားပွီ။ အခု ကစပွီးတော့ ပွနျရေးပေးပါတော့မယျ။ အခု ကြှနျတျော မိတျဆကျခငျြတာ ကတော့ ကြှနျတျော ဖနျတီးထားတဲ့ အင်ျဂလိပျ-မွနျမာ , မွနျမာ-အင်ျဂလိပျ အဘိဓာနျလေးဘဲဖွဈပါတယျ။ အစကတော့ ကြှနျတျော က Windows မှာဘာ အဘိဓာနျသုံးရမလဲမသိတာနဲ့ မထူးပါဘူးကှာ ကိုယျ့ဘာသာကိုယျရေးသုံးမယျဆိုပွီးတော့ .Net Framework 4.0 ပျေါမှာအခွခေံပွီးတော့ ရေးသားလိုကျတာပါ။ နောကျတဈခုက ဘယျအဘိဓာနျမဆို စာလုံးအသဈတှေ ကိုယျ့ဘာသာကိုယျစိတျကွိုကျထညျ့လို့မရတာတှကေိုပါစိတျတိုငျးမ ကတြဲ့အတှကျကွောငျ့ စာလုံးအသဈတှပေါထညျ့လို့ရအောငျ ရေးထားပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ အဘိဓာနျကို သုံးမယျဆိုရငျတော့ .Net Framework 4.0 ရှိရမှာဖွဈပါသညျ။ နောကျပွီးတော့ ဇျောဂြီ ဖောငျ့နဲ့ ကီးဘုတျရှိရမှာဖွဈပါတယျ။ Requirement မြားမွငျ့နလေားမသိဘူး။ .Net Framework 4.0 မရှိဘူးဆိုရငျတော့ […]
By danyawadi May 29, 2012 Leaveacomment
Guest. It’s 06:49 PM – Myanmar time. Register or Login | Download Myanmar Font Planet Myanmar Dictionary Planet Myanmar Dictionary for Android OS based mobile phone. Android version : 2.3+ Product version : 1.1 (Offline – English to Myanmar) SEARCH – searches the whole string asaword only. It will look foradirect […]
Online English-Myanmar Dictionary / မြန်မာစာလုံးပေါင်း / ( သင်ပုန်း�ကီး )
By danyawadi April 30, 2012 Leaveacomment
English-Myanmar Dictionary Myanmar Spelling Lookup Learn Myanmar Sar (သင်ပုန်းကြီး) AYinePan E-Zine A Random Myanmar Quote ၀လွန်းလျှင်လေး ပိန်လွန်းလျှင်ခြောက် ပုလွန်းလျှင်ပျောက် ရှည်လွန်းလျှင်တောင့် အရေးကြီးတာ ဂေါက်မဖြစ်ဖို့ပါ ။ -TunTun – (ayinepan.com) Online English-Myanmar Dictionary [ A | B | C | D | E | F | G ] [ H | I | J ] K | […]
ကွန်ပျုတာအတွက် showyoe diectionary unicode အဘိဓာန်ဆော့ဝဲလေးပါ
By danyawadi April 18, 2012 Leaveacomment
ကွန်ပျုတာအတွက် showyoe diectionary unicode အဘိဓာန်ဆော့ဝဲလေးပါ ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ ကွန်ပျုတာထဲမှာ အင်စတောလုပ်ပီး သုံးဖို့အဘိဓာန်ဆော့ဝဲ ကောင်းလေးပါ တစ်ခု မဟုတ်တစ်ခု ပြောင်းသုံးချင်ရင်ယူထားလိုက်ပါ အသေးစိတ်ကို မူရင်းလင့်မှာဖတ်ကြည့်ပါ Unicode Font ရှိမှရမှာနော် ကဲလိုချင်ရင်ဆွဲ……………..။ ဒီမှာ Download ယူပါ Showyoe မြန်မာ <= = => အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန် မူရင်းလင့် – http://www.myanmartutorials.com/announcements/shweyo Posted by မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) at 1:28 PM0မှတ်ချက် Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook Labels: Computer မှာသုံးဖို […]
နိုင်ငံခြားဘာသာစကားမှမြန်မာစာသို့ တိုက် ရိုက် ပြန် ဆို နိုင် သော နည်း ပညာ
By danyawadi April 15, 2012 1 Comment
ပထမ မိမိ ဘာသာပြန် လိုသည်ကို Google Translate တွင်ဘာသာပြန်ယူပါ။ Google Translate ရ ရှိလာသော Unicode ဘာသာပြန်စာကို Zawgyi1 <=> Unicode Converter ပြုလပ်ရန် အောက်ပါ လင့်အသစ်ကို နှိပ်၍ တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်နိုင်ပါသည်။ http://www.myanmars.net/winmyanmar/myanmar-unicode-converter.htm အထက်ပါ အတိုင်း ပြုလပ်ပါ။ နောက်ဆုံး Edit လုပ်၍ တင်ပေး လိုက် သည်။ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ဘာသာစကား ၂၄ မျိုး မှ မြန်မာသို့တိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုနိုင်သော ဝက်ဘ်ဆိုက် ဘာသာစကား ၂၄ မျိုးမှ မြန်မာသို့ တိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုနိုင်သော ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု လွှတ်တင်ထားTuesday, June 14, 2011ဘာသာစကား ၂၄ မျိုးမှ မြန်မာဘာသာသို့ ပြောင်းလဲ ဘာသာပြန်ပေးနိုင်သော […]
By danyawadi April 10, 2012 Leaveacomment
အဘိဓါန် သုံးနိုင်ရေး ကဏ္ဍ- မြန်မာ။အင်္ဂလိပ် အင်္ဂလိပ် ။ မြန်မာ နှင့် ဘာသာများ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မြန်မာတို့ တိုးတက် နိုင်ကြပါစေ အောက်တွင် ရွေးချယ်ပြီး သုံးနိုင်ကြပါပြီ မြန်မာ- အင်္ဂလိပ်(စိုင်း-အဘိဓါန်) Dictionary Planet-EngBur Dictionary အင်္ဂလိပ် -မြန်မာ -Dictionary Bur-English Dictionary Student!s Dictionary ———————————————————— Nor/Bur ORDBOK နော်ဝေ-အင်္ဂလိပ် -မြန်မာ Dictionary ပါဠိ -မြန်မာ Dictionary(ပြုပြင်ဆဲ) LEXIN Dictionary LEXIN Bildetema Mobile-translatorံ Google-translator Translate.reference Thefreedictionary-Nor Thefreedictionary-Eng